Home News ”Tani waxay daliil cad u tahay siyaasad xumida Nabad iyo Nolol iyo...
”Tani waxay daliil cad u tahay siyaasad xumida Nabad iyo Nolol iyo faham la’aanta ka heysata siyaasada”
Madaxweynaha dowlada Uganda Yowerki Musaveni ayaa sheegay inay dunida ka jiraan dalal dhowr ah oo aan dowlad lahayn. isagoo tusaale cad aan ganbad laheyn u soo qaatay Soomaaliya.
“Waxaa jira dalal badan oo aan dowlad lahayn, Waa jiraan, mana laha maamul shaqeeya, Soomaaliya ayaa ka mid ah qaar kale ayaa jira laakin ma sheegayo kuwaasi sababo diblomaasiyadeed awgood..” ayuu yiri Madaxweynaha Uganda oo ciidamo badan ka joogaan Soomaaliya.
Hadalkan kasoo yeeray Madaweynaha Uganda waxaa taageeray mid xaqiiqa u muuqatana ka dhigay Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo katirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxa uuna Xildhibaanka dhaliilay hab maamulka Dowlada Nabad iyo Nolol.
Waxa uu sheegay Xildhibaanka hadalka kasoo yeeray Madaxweynaha dalka Uganda in daliil cad u tahay siyaasad xumida Nabad iyo Nolol iyo faham la’aanta ka heysata siyaasada arimaha dibeda iyo loolanka siyaasadeed ee kajira Geeska Africa .
Halkan ka Akhriso qoraal kooban uu Xildhibaanka arintan uga hadlay
Tani waa bilow ka tarjumaya waxa soo socda, WAXA QARSOONA KA WAYN!
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa yiri: Waxaa jira waddamo badan oo aan lahayn dawlad. Way joogaan, laakiin ma haystaan ​​hay’ado abaabulan oo maamula, Soomaaliya ayaana mid kamid ah kuwaas!
Tani waxay daliil cad u tahay siyaasad xumida Nabad iyo Nolol iyo faham la’aanta ka heysata siyaasada arimaha dibeda iyo loolanka siyaasadeed ee kajira Geeska Africa oo u baahan in si foojigan oo miyir qabta looga baaraan dago, si aan loogu dhicin qorsheyaasha iyo danaha isdiidan ee quwadaha waaweyn iyo kuwa Geeska Africa ee ku wajahan dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Tani waa bilow ka tarjumaya waxa soo socda, WAXA QARSOONA KA WAYN sidaas daraadeed waxaan kugula talinaynaa Mudane Madaxweyne in dalkaan iyo dadkaan loo turo, lagana daayo siyaasadaan qar iska tuurnimada ah ee aad ku maamulaysaan!